Dustin Johnson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Gorufu Dustin Johnson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Dustin Johnson Biography inokuudza chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, hama (Austin naLaurie), Wife (Paulina Gretzky). Kunyanya zvakadaro, vana vake (Tatum Gretzky uye Rwizi Jones), Hupenyu hwePamoyo, Mubhadharo, mambure akakosha uye Lifestyle.
Mumashoko akareruka, isu tinopenda mufananidzo wepfungwa wenhoroondo yehupenyu hwaDustin Johnson, nyanzvi Golfer uye PGA Tour menduru kubva kuUS. Iyi biography inotangira kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika ave nemukurumbira.
Kuti uwedzere rudo rwako rwehupenyu, tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwake. Pasina kupokana, iwo mafoto aunoona pazasi anopfupikisa Dustin Johnson's Biography.
Dustin Johnson Biography - Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nyaya.
Ehe, isu tinoziva kuti hunyanzvi hwake hwegorofu hwamuisa pakakwirira munhoroondo yeGorofu. Izvi zvakave pachena sezvo nyika yakaona Dustin achiisa Scoring Record mushure mekuhwina masters e2020 - inguva itsva york report.
Zvisinei nekubudirira kwake, takaona kuti vanhu vashoma vane zvakadzama nhoroondo yehupenyu hwaDustin Johnson. Naizvozvo, isu takazviona zvakakodzera mukugadzirira kushandira iwe iyo inonakidza nyaya uye kuparara kwezviitiko zvake zvegorofu. Saka, mukuda kweMweya, ngatitangei.
Dustin Johnson nyaya yehucheche:
Kune ekutanga Biography, iye ane zita remadunhurirwa rekuti - DJ. Dustin Hunter Johnson akazvarwa pazuva re22nd raJune 1984 kuna amai vake, Kandee Johnson uye baba, Scott Johnson, muColumbia, South Carolina, USA.
Shasha yeGorofu yakauya pasi rose semwana wekutanga pakati pevanin'ina vake vaviri (Austin naLaurie). Ivo vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, vanoratidzwa pazasi.
Tarira vabereki vaDustin Johnson - amai vake, Kandee Johnson uye baba, Scott Johnson.
Paaive mudiki, Dustin Johnson akayemura achiona baba vake vachipinda mugorofu vachikura muSC nevanin'ina vake (Austin naLaurie).
Nekudaro, iye akarota zvekuve nyanzvi mune zvemitambo gorofu. Nekudaro, kuve neprojekiti sababa, aipinda mukudzidzira-kwake uye akadzidzawo kutamba gorofu kubva pakuona mamwe magorofu achitamba.
Mufananidzo uri kukura waDustin Johnson (kuruboshwe) nemunun'una wake Austin Johnson (kurudyi).
Pamberi pemukurumbira wake, iyo American Pro Golfer yaive nechinhu chekuputisa mikana yakawanda. Haana kumboita seanotora zvinhu zvakakomba, chimwe chinhu chemwana wemusango. Asi zvakare, kukomba kwake kwakawedzera sezvaakakura.
Dustin Johnson Nhoroondo Yemhuri:
Baba vaDustin Johnson (Scott Johnson) aive nyanzvi yegorofu uye anofanirwa kunge akakonzera kuda kwaDustin zvakanyanya. Kune rimwe divi, amai vake, Kandee Johnson, vaive mumabhizimusi akasiyana siyana. Nekudaro, Mari aive asina kana nyaya zvachose muhupenyu hwemhuri uye kurera kwakazara.
Dustin Johnson Mhuri Kubva:
Pane chirevo chinoti "isu tese tinotakura mukati medu vanhu vakauya pamberi pedu". Vanhu ava ndivo vatinongedzera kwavari semadzitateguru edu. Joinha isu apo isu tichizarurira kwauri izvo zvinosanganisirwa nemadzitateguru aDustin Johnson.
Kufanana nababa vake nasekuru, iye Gorofu Champion akaberekwa uye akarererwa kumucheto kweColumbia, South Carolina. Nekureva, zvinoreva kuti mhuri yaDustin Johnson vakagara muguta kwemakumi emakore.
Kubva pane zvataurwa pamusoro, tinogona kugumisa kuti Dustin Johnson ndeweAmerica uye werudzi rwevachena. Heino mufananidzo unotsanangura iyo Goridhe midzi.
Mepu inoratidza midzi yaDustin Johnson (Columbia muSC)
Dustin Johnson Ekutanga Basa:
Sezvo American Golfer payakakura, hunyanzvi hwake hwegorofu hwakawedzera zvishoma nezvishoma. Kukudzwa kwehunyanzvi hwake kwakaitika nekukasira zvekuti pamakore gumi nemana, vanhu vakamubhejera paC SC Dustin Johnson aive achiri kukoreji panguva iyoyo mukana paakamuwana.
Munguva iyi yekoreji nguva semutevedzeri, Dustin Johnson akahwina Monroe Inokoka uye yekuchamhembe kweAmateur muna 2007. Pazasi pane mufananidzo unounza mupfungwa mubairo wa2007.
PaMonroe Kukoka muna 2007.
Dustin Johnson Dzidzo:
Sezvambotaurwa, Dustin akakurira muSouth Carolina uye saka nedzidzo yake yese ipapo. Akaenda kuDutch Fork High Chikoro, panguva yaaitamba gorufu. Shure kwaizvozvo, akaenderera kuC Coastal Carolina University, kwaakakwiridzira muSports Management.
Dustin (kurudyi kurudyi) - Pikicha ine vekuchikoro chepamusoro vachiratidza yavo mibairo yetimu.
Dustin Johnson Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
DJ. Shure kwaizvozvo, Dustin Johnson akaenderera nekuwedzera kumwe kukunda sekufamba kwenguva.
Dustin Johnson panguva yake yekuzorora mwaka 2010.
Gore 2010 rakava mwaka wake wekuzorora. Akakunda kaviri paPGA Tour, achigadzira timu yake yekutanga yeRyder Cup. Kukunda uku kwakava nzvimbo yake yekupinda mune stardom, uye haasati amboona kudzikira kubva ipapo.
Dustin Johnson Biography - Kumuka kune Mukurumbira:
Iyo PGA Tour champ yakawana yake yepamoyo-yekupedzesa mumakwikwi makuru pa2011 Open Championship muEngland. Zita rake rinotevera rakatevera rakaitika muna 2016 US Open uye yakanga iri yegumi yake kukunda kwePGA Tour.
Dustin Johnson anokunda Masters kutora 2nd huru zita.
Zvichienderera mberi, akagadzira akahwina akati wandei kubva 2017 kubvira panguva iyoyo. Yake ichangopfuura yaive pa7th zuva raKukadzi 2021, uko DJ yakahwina Saudi International kechipiri; yakanga iri kukunda kwake kwepfumbamwe paEuropean Tour.
Kukunda kwa9 kwaDustin Johnson paEuropean Tour.
Johnson akabva ajoina Tiger Woods sevaya vega gorofu pamakumi matatu emakore apfuura kusvika kumakwikwi emabasa gumi nematanhatu vasati vasvitsa makore makumi matatu nemana. Anove chinzvimbo cheGolfer akanakisa pasi rose (sekureva kweRinyorese Nyika Gorofu Chinhanho).
Pazasi peiyo vhidhiyo clip kwaanotumidzwa kunzi semumwe wevatyairi vepamusoro parwendo.
Ona vhidhiyo pazasi pekuti maAmerican Golfer akashamisa sei kukunda kwe23 yechiitiko chake chePGA TOUR kuEast Lake Golf Club. Chokwadi, Dustin Johnson mutambi akazara. Vamwe vese sekutaura kwedu, kweBiography yake, inhoroondo.
Phil Mickelson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Ndiani Dustin Johnson Kufambidzana?:
Kunyangwe asina kuroora, muna Nyamavhuvhu 2013, Johnson akapfimbwa nemodel muimbi uye mukurumbira Paulina Gretzky. Iye ndiye vana veCanada hockey ngano Wayne Gretzky naJanet Jones.
American Golfer akasangana naGretzky muna 2009 asi akatanga kufambidzana zviri pamutemo kusvika kutanga kwa2013. Vane vanakomana vaviri, Tatum Gretzky Johnson naRwizi Jones Johnson.
Dustin Johnson akasangana naPaulina Gretzky muna2009 asi akatanga kufambidzana zviri pamutemo kusvika kutanga kwa2013.
Zvizhinji nezve Vana vaDustin Johnson:
Ipo Tatum Johnson akazvarwa pazuva re19th raNdira 2015, Rwizi Johnson akazvarwa pazuva re12th raJune 2017. Ndiani anoziva kana mumwe wevana vake angakwevawo munzira imwechete sababa vavo, nasekuru vavo, Scott Johnson.
Exudes yemhuri inofara inoratidza Baby Tatum, mwana wekutanga waDustin.
Dustin Johnson Hupenyu Hwemhuri:
Kubudirira kweAmerican PGA Tour medalist ingadai yakave mirage pasina kuratidzira kusingagumi kwekutsigirwa nerudo nenhengo dzemhuri yake. Pane ino account, ngatitorei zvimwe zvinhu muhupenyu hwavo hwega.
Zvizhinji Nezve Dustin Johnson Baba:
Mutambi wepamutambo wegorofu aive nababa vake sekurudziro uye murairidzi wake wekutanga. Baba vaDustin Johnson (Scott Johnson) vaivewo nyanzvi yepamutambo wegorofu uye vanofanirwa kunge vakakonzera kuda kwaDustin zvakanyanya pakutanga kwehupenyu.
Mutambi wepamutambo wegorofu aive nababa vake sekurudziro uye murairidzi wake wekutanga.
Iye ndiye akaendesa Dustin kumarafu kekutanga paChitanhatu (6). Kugona uye kufarirwa kweGolfers Baba vakaitawo basa mukumhanyisa kunoshamisa kwakasimudzira hunyanzvi hwaDustin Johnson.
Nekudaro, kusiyana naDustin, baba vake (Scott Johnson) vakatanga basa rake reGorofu aine makore makumi maviri. Chikonzero chiri chekuti akatanga sebasketball mutambi pakutanga. Scott Johnson akamboshandawo semusoro wehunyanzvi kuMid Carolina Golfers Club muma20.
Mr. Scott Johnson akatanga rake gorufu makore makumi maviri.
Yaive mubatanidzwa waScott Johnson naKandee Johnson vakaburitsa Dustin Johnson. Zvakadaro, mushure memakore mazhinji ekugara pamwe chete, vabereki vaDustin vakarambana. Havana kuzotaurirana kubva ipapo.
Kuparadzaniswa kwakasiya Dustin nevanin'ina vake padivi rekusarudza kugara navo pamwechete. Saka Dustin nehanzvadzi yake (Laurie) pavakagara nababa vavo (Scott Johnson), munin'ina wake (Austin) akafunga kugara naamai vake (Kandee Johnson).
Zvimwe Zvakawanda Nezve Dustin Johnson Amai:
Kutakura zita remusikana Kandee Whisnant amai vaDustin, Kandee Johnson. Iye ndiye mwanasikana wemukurumbira webhasikiti mukwikwidzi Art Whisnant. Kandee ndiye mukuru pakati pevamwe vake vatatu hanzvadzi mumhuri yevabereki vake.
Amai vaDustin, Kandee mwanasikana weaimbova mukwikwidzi webhasikiti ane mukurumbira Art Whisnant.
Pakutanga, akawana chouviri semukadzi bhizinesi. Munguva iyoyo, Kandee akachengeta chitoro chemitambo pamwe nemurume wake wekare, Scott Johnson.
Kunyangwe achiri mubhizinesi, amai vaDustin (Kandee Johnson) vakasarudza kugara hupenyu hwavo kure neruzhinji. Kandee anoda vana vake zvakanyanya uye haamboregi rutsigiro rwake rwakatsiga kune vese.
Zvimwe Zvizhinji nezvaDustin Johnson Vanun'una:
Sezvambotaurwa, Dustin Johnson akauya pano pasi sedangwe pavakoma vaviri, mukoma nemunin'ina anonzi Austin naLaurie, zvichiteerana. Ona zvimwezve nezve mumwe wavo.
Nezve Dustin Johnson Hama - Austin:
DJ, semwana wedangwe wemhuri, anoramba ari mufananidzo wevakoma vake vadiki. Munin'ina waDustin, Austin Johnson, uyo anodawo Mitambo anotarisa kwaari. Zvinoita kunge mweya wemitambo unowana ivhu rayo mukati memhuri.
Mufananidzo waAustin Johnson naDustin.
Paaive achiri kuyaruka, aifarira kutamba gorofu zvakare, asi akasarudza kudzidzira basketball. Munin'ina waDustin, Austin Johnson, akazove caddy waDustin panguva yemitambo. Akanga ari caddy apo Dustin Johnson akahwina muhombe panguva ye2020 Masters.
Austin akapedza kudzidza kubva kuCharleston Southern University. Akaroora anofara uye baba vane vanakomana vaviri.
Nezve Dustin Johnson Sista - Laurie:
Saizvozvowo, munun'una waDustin, Laurie, anogara kuColumbia. Akapedzawo kudzidza kuDutch Fork High. Laurie anogona kunge ari munhu wemitambo sababa vake, Scott Johnson, naDustin Johnson naAustin Johnson. Ari izvo, akakura pamwe navo vese. Kunyange asina kuroorwa, ndiamai vevanakomana vaviri.
Mufananidzo waDustin Johnson nevanin'ina vake (Austin, kuruboshwe kuruboshwe naLaurie, wepakati).
Zvizhinji Nezve Dustin Johnson Hama:
Sezvo panguva yekunyora-iyi, isu tinoziva zvishoma nezve vazhinji vehama dzake. Asi zvekare, baba vake Vakuru, Art Whisnant, vaiita basketball kuSC uye yaive katatu-nguva yese -Atlantic Coast Musarudzo musangano muma1960. Akaita mitezo mizhinji yekukudziridza hunyanzvi hwemitambo hwevazukuru Austin naDustin Johnson, zvichiteerana.
Mufananidzo waBaba vaDustin Vakuru, Art Whisnant.
Kunyangwe iri rakabatikana chirongwa chakabatanidzwa nehupenyu hweye Star golfer, Dustin, munguva yake yemahara, anofarira kuraura. Anofarira mitambo yemvura uye ane chikepe. Zvakare anoda chipfuyo, ane imbwa mbiri, Goldendoodle inonzi Daisy uye labradoodle inonzi Charlie.
Dustin nemukoma wake (Austin Johnson) vachiredza.
Yake yakakura sutu yekuunganidza, iine dzinenge makumi matatu Prada uye Dolce & Gabbana masutu, inotaura vhoriyamu nezve rudo rwake rwekupfeka masutu. Maakaundi ake enhau enhau ane huwandu huri kusimuka hwevateveri. Ipo yake Instagram iine vangangoita 30M vateveri, yake Twitter ine vangangoita miriyoni vateveri zvakare.
DJ akunda zvakadaro moyo yevafudzi vake vari kuwedzera.
Iwe unofunga chii iwe wepasirose wepamusoro gorofu unoita nemamirioni avo ese? Ivo vanoipedzera pamusoro-pe-iyo-mota mota, Kubva Ferraris kuenda kuMcLarens uye Porsches kuenda kuLamborghinis uye dzimba dzepamusoro. DJ ane chokwadi chekuti haana kusiiwa. Pazasi pechiratidziro neimwe yemota dzake.
Goroferi wepamusoro-soro neimwe yemota yake yepamusoro.
Akatenga imba muPalm Beach Gardens, Florida, muna2015, kwemadhora mazana mashanu. Kunyangwe zvese, kutanga kwa5, mushure mekugadzirisa chivakwa, iyo golfer yakatengesa iyo $ 2021 mamirioni. Imba yacho ine chitsuwa chakazvimiririra, chikepe chega chikepe, uye dzimba dzekurara nomwe.
Yemuchadenga pamwe mukati kuona kweimwe yedzimba dzaDustin.
Kubva muna Kubvumbi 2021, Dustin Johnson anogara wechina paPGA Rwendo Rwokuita Mari runyorwa ane anopfuura $ 4m (net worth), kuseri kweTiger Woods chete, Phil Mickelson uye Jim Furyk. Mubhadharo waJohnson muna 2020 waive madhora makumi maviri nemana emadhora. Akavawana kubva kumakwikwi ake gumi nesere.
Adidas, BodyArmor, Hublot, uye TaylorMade mamwe emakambani epamusoro arikutsigira Johnson. Goridhe Star inowanawo $ 11 miriyoni pagore kubva kune zvaakagumisa.
Dustin achiratidza kupfeka kwake Adidas.
Dustin Johnson Untold Chokwadi:
Asides kubva kune irwo ruzivo rwapihwa pamusoro, hezvino zvishoma zvinoverengeka zvinokunetsa nezvaDustin Johnson nebasa rake regorofu kusvika ikozvino.
Chokwadi # 1: Anonetseka Wechidiki:
Aive akaremerwa achiri kuyaruka uye saka akabatanidzwa mukuba. Pamwe zvikonzero zvake zvekushushikana uye kusagadzikana zvaive nekuda kwekuparadzaniswa kwemubereki wake.
Dustin akaba pfuti. Chiitiko ichi chakaburitswa pachena apo imwe yeshamwari dzake netsaona akashandisa pfuti pachena, nekudaro achitaura chokwadi nezvembavha.
Chokwadi # 2: Nheyo uye Charity:
Ane hwaro hwake, hwakavambwa muna 2010. Inotarisira kubatsira vechidiki, kunyanya nevechidiki uye epamberi gorofu zvirongwa.
Iyo nheyo ndipo panowanikwa mari dzese dzinoenda kunopa kudzidza uye zvishandiso kune vechidiki vanoshaya.
akatanga iyo Dustin Johnson Gorofu Chikoro ku TPC Myrtle Beach muSouth Carolina.
Chokwadi # 3: Nharo nezve Kumiswa Kwezvinodhaka:
Mumwaka wa2014, Johnson akazivisa zororo rekusavapo kubva kuPGA Tour kuti agadzirise "zvinetswa zvemunhu". Mukupesana, zvinoenderana nezvakawanda zvakaburitswa gorufu, zororo iri nekuti PGA Tour yakanga yamisa Johnson kuti aongorore mushonga wakanaka.
Iyo Golf Magazine yakazivisa kuti Johnson akaedza kuongorora mashandisiro ecocaine.
Chokwadi # 4: Kukuvara:
Johnson akakuvara musana kumba munaKurume 2021 uye akarasikirwa kwemwedzi miviri yemwaka, kusanganisira wekutanga mukuru paMasters. Neraki, akapora ndokudzoka muna Chivabvu gore rimwe chetero.
Dustin Johnson akapora uye akadzoka muna Chivabvu gore rimwe chete.
Chokwadi # 5: Kubiridzira Runyerekupe:
Nguva dzinoverengeka, runyerekupe rwakaenderera mberi nezvake kubiridzira amai vevana vake. Zvino, mugore ra2014 mupepanhau wakamuona mumufananidzo, achitora ruoko rwemukadzi waanoshanda naye Will MacKenzie, Alli MacKenzie, waaive naye mukurambana.
Muna 2018 zvakare, vateereri vemukurumbira vakamubata paakanga achidya nemukadzi asingazivikanwe.
Kuti utarise vhidhiyo yake yake yeichi chisina chokwadi chokwadi,
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yehupenyu hwake nyaya, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiyo American Golfer.
Dustin Johnson's Bio Dhata
Zita rizere: Dustin Hunter Johnson
Zita rekudanwa: DJ
Zuva rekuzvarwa: 22nd yaJune 1984
Nzvimbo yekuzvarirwa: Columbia, South Carolina, US
Basa: Gorofu Player
Dzidzo: Dutch Fork High Chikoro uye Coastal Carolina University
Baba: Scott Johnson
Amai: Kandee Johnson
Wife / Musikana: Paulina Gretzky
Vana (Vanakomana): Tatum Gretzky Johnson uye Rwizi Jones Johnson
Vanun'una: Austin Johnson (Hama) naLaurie Johnson (Hanzvadzi)
Hama: Art Whisnant (Vanasekuru Sekuru)
kukwirira: 6 ft 4 inches (1.93 m)
Muhoro: $ 24 mamirioni approx (2020)
Net Worth: $ 71 mamirioni approx (ESPN)
Residence: Palm Beach Gardens, Florida, US
Social Media Instagram (@djjohnsonpga), Twitter (@DJohnsonPGA) uye Facebook (facebook.com/DustinJohnsonPGA)
Tony Finau Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Mukuvhara Dustin Johnson's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, ndinofungidzira iwe wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Nekuti Dustin Johnson aive nababa sehunyanzvi, haana kumboshandisa mukana wese kudzidza hunyanzvi hutsva kubva kune vamwe nyanzvi.
Kunyangwe kurambana pakati pevabereki vake kwaisazomutadzisa. Kupererwa kwake, kutsunga uye kusimba kwaive kwechipiri kune hapana. Nekufara zvakakwana, maitiro ake akabhadhara nguva huru.
Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-kumusoro kunonakidza uye kunonakidza. Nomutsa verenga zvimwe Golfers biography chokwadi.
Childhood Biography Diary- yeMA PROFESSIONAL GOLFERS
Brooks Koepka Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Jordani Njere Mucheche Usana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
Tiger Woods Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Dai 28, 2021